Afrika, manam-pahaizana manokana momba ny fizahan-tany Safari any Alemana no mitady ny didim-pitsarana momba ny fampitandremana momba ny dia
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Afrika, manam-pahaizana manokana momba ny fizahan-tany Safari any Alemana no mitady ny didim-pitsarana momba ny fampitandremana momba ny dia
Roa ireo manam-pahaizana manokana momba ny fizahantany safari any Afrika no nametraka fangatahana ara-dalàna tany amin'ny Fitsarana Avaratry Berlin mba hananana didy tsy maharitra hialana amin'ny fampitandremana ny raharaham-bahiny manerantany momba ny dia any Tanzania, Seychelles, Mauritius ary Namibia.
Ny Adangan'ny Afrikana Elangeni avy any Bad Homburg sy Akwaba Afrika avy any Leipzig avy any Leipzig dia nametraka ny fitakiany ny zoma 12 jona. Fitsarana natao ho an'ny governemanta Alemanina sy ireo firenena mpikambana ao amin'ny Vondron Eropeana hafa izany mba hanajanonana ny fampitandremana momba ny dia ho an'i Tanzania, Seychelles, Mauritius, ary Namibia.
Hafatra nalefan'ny mpikambana iray ao amin'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) Ny Task Force avy any Alemana avy eo hitan'ity mpanao gazety eTN ity dia nilaza fa ireo manam-pahaizana manokana momba ny safari dia nanontany didy ara-dalàna tao amin'ny Fitsarana Avaratry Berlin mitady fangatahana vonjimaika mba hampiala ny Birao misahana ny raharaham-bahiny alemana ny fampitandremana momba ny toerana safari 4.
Nilaza ireo orinasa 2 fa ny fampitandremana momba ny dia ho an'i Tanzania dia milaza diso fa misy loza mitatao amin'ny aina sy ny rantsambatana, zavatra tsy mitombina. I Alemana dia loharanom-barotra lehibe ho an'i Afrika, na dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny bibidia sy ny natiora eto amin'ity kaontinanta ity aza izy.
"Akwaba Afrika sy Elangeni African Adventures dia ao anatin'ny vondrom-piarahamonina misy tombotsoan'ny mpandraharaha mpizahatany afrikanina manerana an'i Alemana, izay noforonina tamin'ny fihanaky ny areti-mandringana Corona," hoy ireo orinasa 2 tao anaty fanambarana iray.
Tanzania, Seychelles, Mauritius, ary Namibia dia efa misokatra ho an'ny mpizahatany na nanambara ny fikasana hisokatra tsy ho ela.
Raha ny fanazavan'ireo mpisantatra dia ambany kokoa noho ny any amin'ny firenena eoropeanina ny trangana aretina any amin'ireo firenena ireo, ary misy ihany ny fepetra momba ny fahadiovana sy ny fikajiana.
Noho izany, tsy misy "fanamarinana mifandraika amin'ny fiarovana azo antoka amin'ny fampitandremana momba ny dia" hoy izy ireo.
"Ny fizahantany dia fiarovana ny natiora," hoy i Heike van Staden, tompon'ny Elangeni African Adventures.
“Raha tsy misy vola miditra amin'ny fizahan-tany, firenena afrikanina maro no tsy afaka mandoa ny mpiambina azy hitehirizana ny fahasamihafana voajanahary tsy manam-paharoa any Afrika. Hatramin'ny fipoahan'ny korona sy ny tsy fisian'ny mpizahatany vokatr'izany dia nitombo be ny fanararaotana tany amin'ny firenena afrikanina maro, "hoy izy nanampy.
David Heidler, Tale mpitantana ny Akwaba Afrika, dia nanantitrantitra ny fiatraikany ara-toekarena tamin'ny fampitandremana momba ny dia.
“Ny fitazonana ny fampitandremana momba ny dia an-tany dia manimba ny asa fivelomana any Alemana sy ny toerana itodiana. Ho rava ny mpandraharaha aty Afrika noho ny fahaverezan'ny vanim-potoana fitsangatsanganana iray manontolo, "hoy izy.
"Any amin'ny firenena tsy misy fanampiana avy amin'ny governemanta na rafitra ara-tsosialy sahaza, ny krizy dia mamely mafy indrindra ny mpiasan'ny hotely sy ireo mpanome tolotra fizahan-tany hafa," hoy i Heider tao anaty fanambarana iray.
Na dia nisokatra ho an'ireo mpizahatany aza i Tanzania ary nampihatra fepetra maro hisorohana ny aretina, ny fampitandremana momba ny dia an'izao tontolo izao kosa dia manome soso-kevitra amin'ny mpanjifa fa misy "loza mety hitranga amin'ny fiainana sy ny rantsambatana", hoy ihany izy.
Raha jerena ny zava-misy fa 509 monja ny virus coronavirus sy maty 21 no natrehan'i Tanzania hatreto, ny dingana nataon'ny mpiasan'ny fizahan-tany alemana mba hametra-panontaniana momba ny fanapaha-kevitry ny biraon'ny raharaham-bahiny alemana hamoaka fampitandremana momba ny dia an-tany ho an'ny firenena 160, ao anatin'izany ny firenena afrikanina rehetra. .
"Manantena izahay fa izany dia hanery ny Minisiteranay hamerina handinika ny fampitandremana ataon'izy ireo momba ny dia sy hamakafaka ny toe-javatra isam-pirenena ary tsy hanao izany amin'ny fomba mora handrarana ny rehetra," hoy ireo orinasa safariy 2.
Betsaka ny famandrihana no nofoanana nefa tsy nosoloina, ary ny fampitandremana momba ny dia dia midika fa tsy azo fenoina ireo mpizahatany alemanina marobe ireo boky manafatra ireo.
“Tsy tokony ho faty i Serengeti, nitaky ny mpanao sarimihetsika biby Bernhard Grzimek, efa 61 taona lasa izay. Anjaran'ny governemanta alemanina irery izao, "hoy i Heidler.
Elangeni African Adventures dia natomboka tany Alemana tamin'ny taona 2003 ary miasa ankehitriny any amin'ny firenena afrikanina 24 ao anatin'izany ny nosy any amin'ny Ranomasimbe Indianina.
Akwaba Afrika dia manana serivisy fizahan-tany any amin'ireo firenena afrikanina isan-karazany amin'ny safaris dia sy ny fialantsasatra amoron-dranomasina.
Tamin'ny alàlan'ny taratasy misokatra iray natao ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona eropeana (UE) rehetra, Elangeni African Adventures ary orinasam-pizahantany hafa any Eropa sy Afrika dia nilaza fa ny fanafoanana ny dia any Afrika dia hitondra fiatraikany ratsy amin'ny fiarahamonina afrikana ambanivohitra.
Ireo nanao sonia ny taratasy misokatra misolo tena ny ankamaroan'ny indostrian'ny fizahantany any atsimon'i Sahara sy ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (ONG) dia nanolotra fanitsiana ny lalàna mifehy ny mpanjifa ao amin'ny EU izay hanampy amin'ny fiantohana ny valan-javaboary sy ny biby dia ary koa ny ny fiainam-piarahamonina afrikanina ambanivohitra mahantra dia tsy voarebireby loatra rehefa nofoanan'ireo mpizahatany eoropeanina ny fitsidihan'izy ireo an'i Afrika mandritra ny aretina tampoka, fikorontanana ara-bola manerantany, na fanakorontanana politika.
"Ny antony ijoroanay momba an'io tolo-kevitra io dia hazavaina amin'ireto fizarana manaraka ireto: asa any ambanivohitra, fahantrana ary fanararaotana, harena voajanahary, fiarovana, ary fiovan'ny toetr'andro," hoy izy ireo.
Safari sy fizahantany miorina amin'ny natiora matetika no hany mpampiasa ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra izay monina akaikin'ny toerana fitehirizan'ny bibidia sy ny valan-javaboary. Rehefa misafidy ny hanafoana ny fialan-tsasatra amin'ny fotoanan'ny krizy toy izany ny mpizahatany iray ary voavaly feno ny tahirim-bolany (araka ny lalàna momba ny dia EU ankehitriny), trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny safari, hotely ary mpandraharaha fizahan-tany maro any Afrika Atsimon'i Sahara no hiady mafy ho velona na mandehana amin'ny famonoana.
Tsy afaka mandoa ny saram-pianarany izy ireo, ny saram-pidirana amin'ny valan-javaboary ary ny karaman'ny mpiasa. Ireo saram-pidirana sy fidirana amin'ny valan-javaboary ireo dia mandray anjara betsaka amin'ny fitantanana ny valan-javaboary afrikanina sy ny toekarem-pokonolona manodidina. Betsaka amin'ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina ireo no miankina amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ho an'ny asa ary raha tsy misy izany dia tsy manana endrika fidiram-bola mihitsy.
Any Afrika Atsimon'i Sahara dia tombanana amin'ny antsalany fa mpiasa any ambanivohitra iray no manohana mpikambana 10 ao amin'ny fianakaviana. Raha tsy misy ny fividianana sakafo dia tsy hanana safidy afa-tsy izy ireo, ny fianakaviany, ary ny miankina aminy fa ny hitodika any amin'ny fanjonoana, na ho an'ny hena izany, na ho fitadiavam-bola, hoy ny ampahany amin'ny taratasy nosoniavina ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny EU.
Ny birao fizahantany afrikanina dia fikambanana iray izay ankatoavin'ny sehatra iraisam-pirenena noho izy mpihetsiketsika amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany mankany, avy, ary ao anatin'ny faritra afrikana. Raha mila fampahalalana bebe kokoa sy ny fomba hidirana, tsidiho africantourismboard.com .
Lehilahy manankarena indrindra any Vietnam dia manana drafitra hanavotana an'ity tontolo voan'ny virus ity